« Robinet » sa loharano ? | NewsMada
« Robinet » sa loharano ?
Ratsy taiza ny zaza. Miahiahy anareo raiamandreny ny rehetra. Mifamely fantsy ny samy Malagasy, manana anjara lehibe nahatonga izany ny raiamandreny. Mivarotra tanindrazana ny taranaka, tsy nanafatra angaha ianareo raiamandreny fa fady ny manao izany? Tsy afa-bela mihitsy ianareo raiamandreny amin’ny zava-mitranga eto amin’ny firenena. Raha nambolenareo tao anatin’ny taranakareo tsirairay fa manody ny zava-drehetra, hisy sahy hanao tsinontsinona ny aina ve ? Raha nitantara ny tantaran’ny « Zanak’Antsaly » tamin’ny zanakareo ianareo, ho « tendan-kanina » sy hanao ampihimamba tahaka izao ve ny Malagasy sasantsasany ?
Ampahany ihany ireo fa raha ny zava-misy iainan’ny Malagasy tao anatin’ny taona maromaro, izay ahafahana milaza fa tsy nahatafita hafatra ny sasany aminareo. Ny tena zava-doza, ireo hafatra anisan’ny saropady indrindra no tsy tafitan’ireo ampahana raiamandreny ireo. Anisan’izany ny fitsimbinana ny aina, ny fisian’ny tsiny sy ny tody, ireo karazam-pady, ny tahotra sy ny fahalalana an’Andriamanitra ary ny fahafantarana ny fomba amam-panao.
… Vokany, mianjera eo an-damosin’i Madagasikara avokoa ny tsy fahombiazana rehetra satria mivaona amin’ny lalana tokony halehany ny « zanany ». Marobe ny zava-tsy mitohoka eto. Ohatra mivandravandra, lalàna ho an’ny Malagasy avoaka amin’ny teny vahiny. Haren’i Madagasikara, ny vahiny no misitraka izany. Ny fomba amam-panaon’ny Malagasy, eken’ny tompony fa finoanoampoana, sns.
Ekena fa na zaza niara-notezaina izao ary, samy manana ny toetrany, kanefa raha tafapakanareo ray aman-dreny tany amin’ireo zanaka ny tena maha izy azy sy ny tena momba azy, tsy ho toy izao i Madagasikara sy ny Malagasy. Toa tsy « miteny » intsony ireo fahendrena sy soatoavina malagasy fa ny be vola sy manan-kery no lazaina fa tompon’ny fahamarinana.
Miverena any an-doharano. Ny fahalalana sy ny fahendrena norantovina tany an-doharano tsy mba mamitaka. Sa ve tsy tianareo ilay mankany an-doharano fa saro-dalana ka aleo manodina « robinet » dia mivoaka ny rano ?… Dia sotroy avokoa ary izay mivoaka eo !… Ka ilay izy ary tapaka !